Mala ogaan karaa ninka inuu yahay Bikro?
Subject: Mala ogaan karaa ninka inuu yahay Bikro? Wed Jul 14, 2010 10:13 pm
Haweenay u dhalatay dalka Vietnam ayaa sheegtay inay fududahay in la ogaado inuu ninku yahay bikro iyo in kale, sida darteedna sababtay in niman lagu soo eedeeyay inay wax kufsadeen dabadeedna leeska sii-daayo.
Haweenaydan oo lagu magacaabo Pham Thi Hong, ahna haweenay ka shaqayso dawada dabiiciga ah iyo wax ku daweynta cirbadaha ee loo qayaano Acupuncture ayaa noqotay mid caan ka ah dalkaas, kadib markii ay ka codsatay dowladda in’aan la meel marin go’aan ay maxkamadda sare ee dalkaas soo saartay oo ahaa in sedex nin la xiro kadib markii lagu helay fal kufsi ah.
Hase ahaatee haweenaydan oo baaritaan suubisay ayaa sheegtay in sedexdan nin aysan wax galmo ah aysan suubinin sidaa darteedna aysan cadaalad aheyn in la xiro.
Waxay sheegtay inay fududahay in la ogaado inuu ninku haweenay u galmooday oo loo baahan yahay oo kaliye in la fiiriyo dhegehiisa iyo agtooda oo hadii laga waayo bar yar oo guduudan ay taasi cadaynayso inuu ninkaasi uu galmooday, haddii la helana ay cadaysanaydo inuusan galmoonin.
Inkastoo nimankan lagu xukmay xabsi ayay hadana haweenaydan ku qasabtay dowladda in dib loo furo kiiskooda, taas oo dhalisay in maxkamad kale ay banaanka u tuurto go’aankii xariga inkastoo ay maxkamada sheegtay in tuuritaanka go’aanka xariga uusan shaqo ku lahayn warbixinta haweenaydan dhakhtarada ah.
Madaxweynaha dalkaasi ayaa amray in raggaan arintooda maxkamad loo celiyo, taas oo deedna dhalisay in laga sii daayo xabsigii ay ku jireen oo ay ku jiri lahaayeen mudo 20 sano ah, hadaysan haweenaydan faraha lasoo galin arintooda.
Waxa kaloo ay sheegtay in lagu ogaan karo bikrada ragga in la fiiriyo dareenkooda iyo garaaca wadanaha iyo meelo kamid ah jirka, inkastoo haweenaydan ay noqotay caan, ayaa hadana dad ka shaqeeya xirfadeeda oo kale ayaa aanan aminsanayn in ay runtahay wirbixinteeda.
Subject: Re: Mala ogaan karaa ninka inuu yahay Bikro? Sat Jul 17, 2010 1:53 pm
waa wax lagu qoslo aniga ila ma ahan inuu waxaan yahay mid run ah anigoo ilaalinaya shucuurtaada